China 1530 Fiber Laser Cutting Machine for Sheet Metal Fabrication Manufacturer and Suppliation |Apex
1530 Fiber Laser Machine maka imepụta mpempe akwụkwọ
Fiber laser ọnwụ igwe nkuchi ụwa ama ama Germany IPG fiber laser isi iyi na Raycus laser isi iyi, Raytools ọnwụ isi na ike elekwasị anya usoro, ọ nwere ike bee na ntụmadị iche iche iche iche nke metal ihe na elu nkenke na elu na-agba.Ebe ọ bụ na a na-ebufe laser site na eriri, ọ dịghị mkpa ijikwa ma ọ bụ gbanwee ụzọ anya laser , ọ na-ebelata ọnụ ọgụgụ ndị na-adịghị mma nke igwe ma na-agbatị ndụ ọrụ.Nnukwu ebe igbutu usoro na-egbo mkpa nke ụdị nhazi ígwè dị iche iche.
APEX3015L bụ igwe na-arụ ọrụ fiber laser dị arọ maka imepụta mpempe akwụkwọ, ị nwere ike ịhọrọ ike laser dị iche iche, dị ka 1000W, 1500W, 2000W na 3000W, isi iyi laser nwere ike ịbụ Chinese Raycus, Germany Precitec ma ọ bụ Germany IPG ika.Ihe karịrị ike laser 3000W, anyị nwere ndị ọkachamara fiber laser metal cutters maka ịhọrọ.
Atụmatụ na Uru nke Arọ Ọrụ fiber Laser ọnwụ igwe maka mpempe akwụkwọ Metal mmepụta:
1. High rigidity fiber laser ọnwụ igwe akwa segmented ịgbado ọkụ, adopts nanị annealing nhazi na elu-okpomọkụ NC electric iguzogide ọkụ, hụ na ogologo oge kwụsiri ike na-arụ ọrụ nke igwe.
2. All ntuziaka rails na ịghasa oghere na-egweri site anyị ọkachamara 5 axis gantry egwe ọka igwe na-na larịị.Injinia dị mma na arụ ọrụ a na-ebute mbelata nkenke nke ọma.
3. Igwe igwe na okporo ígwè arụnyere na-adabere na akara ngosi ọkpụkpọ, okpokoro okpokoro dabere na gradienter marble.Injinia dị mma na arụ ọrụ a na-ebute mbelata nkenke nke ọma.
4. The gantry anyị nakweere bụ ọhụrụ imewe ụgbọ elu-ọkwa aluminum nkedo, dochie nke welded ígwè gantry, ọzọ ìhè-ụkwụ na-eme ka dum igwe na-arụ ọrụ ngwa ngwa.
5. New igwe ahụ dum etiti na anwụrụ mmịpụta, belata anwụrụ ọkụ na chippings imerụ ọnwụ isi na oghere.
6. Taiwan Hiwin square okporo ígwè:
Akụkụ nke ọ bụla anyị nakweere bụ nke mbụ, dị ka ụgbọ okporo ígwè Taiwan Hiwin nwere flange, izi ezi dị elu, ebe efu iji zere mkpokọ uzuzu.
7. Swiss Raytool fiber laser ọnwụ isi, ọzọ mmechi iji chebe akụkụ n'ime.
Site na 1500W, anyị ga-enwere nkwalite na isi ịcha laser na mgbado anya akpaaka.
8. Isi iyi laser ika dị iche iche maka ịhọrọ:
Nka nka nke igwe eji egbutu eriri eriri laser maka imepụta mpempe akwụkwọ:
Mpaghara ọrụ 1500mm * 3000mm
Ọsọ ịkpụ kacha 80m/min
Ike Laser 1000W/1500W/2000W/3000W
Oke osooso 1G
Izizi ọnọdụ ugboro ugboro 0.02mm
Ụzọ ịkwọ ụgbọala Yaskawa Servo moto
Ụzọ nnyefe Y-axis gear rack ọkwọ ụgbọ ala okpukpu abụọ, skru bọọlụ X-axis
Ihe achọrọ ike 380V/50HZ/3P (220V dị)
Ibu igwe 3500kg
Ngwa nke igwe eji egbutu eriri eriri laser dị arọ maka imepụta mpempe akwụkwọ:
APEX3015L fiber laser ọnwụ igwe na-ọtụtụ ebe na ike eletriki, ụgbọ ala n'ichepụta, igwe na akụrụngwa, eletriki akụrụngwa, nkwari akụ kichin akụrụngwa, elevator akụrụngwa, mgbasa ozi ihe ịrịba ama, ụgbọ ala mma, mpempe akwụkwọ mmepụta ihe, ọkụ ngwaike, ngosi akụrụngwa, nkenke components, metal ngwaahịa. na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Specialized ngwa ngwa ọnwụ ọnwụ nke a dịgasị iche iche nke metal efere, ọkpọkọ (tinye ọkpọkọ ọnwụ ngwaọrụ), tumadi eji na igwe anaghị agba nchara, carbon ígwè, galvanized mpempe akwụkwọ, electrolytic efere, brass, aluminum, ígwè, iche iche alloy efere, obere metal na ihe ndị ọzọ.
Igwe eji egbutu eriri eriri Laser dị arọ maka imepụta ihe igwe dị n'ụlọ ọrụ:
Ngwugwu igwe na-egbutu eriri eriri laser dị arọ maka imepụta mpempe akwụkwọ:
1. Mmiri siri ike na-anọdụ ala na plywood.
2. Laser isi iyi (akpa plywood kewapụrụ) na akụkụ ahụ mapụtara na akwa akwa laser.
3. Nchekwa nkuku site na ụfụfụ ma dozie ihe nkiri nchebe.
4. Ihe niile na-ekpuchi ihe nkiri nchebe siri ike ma sie ike.
5. Mkpokọta agụụ.
6. N'ime ihe nchekwa etiti ígwè.
7. Nkwakọ ngwaahịa plywood na nchara nchara n'èzí edozi igbe ahụ.
8. Emecha nkwakọ ngwaahịa site na akpa nkịtị ma ọ bụ akpa etiti.
Igwe na-egbutu Fiber Laser dị arọ maka ọrụ nrụpụta metal:
Enwere ike ibupu igwe laser CNC niile site n'oké osimiri, ikuku ma ọ bụ site na ngwa ngwa ngwa mba ụwa site na DHL, FEDEX, UPS.A na-anabata gị ka ị nweta nkwuputa n'efu site n'imejupụta ụdị ahụ na aha, email, adreesị zuru ezu, ngwaahịa na ihe achọrọ, anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge na-adịghị anya ozi zuru ezu gụnyere usoro nnyefe kachasị mma (ngwa ngwa, nchekwa, akọ) na ibu.
Nke gara aga: CNC Machining Center maka ịcha nkume na ire ere ọkụ 2021
Osote: 1390 Metal na Nonmetal Mixed Laser Cutting Machine maka ọrịre
1530 fiber laser igwe
cnc laser eriri igwe
cnc mpempe akwụkwọ fieb ọnwụ igwe
Igwe egbutu eriri
Igwe eji egbutu igwe
2 × 3 CNC Router 6090 maka ọrịre na ọnụ ahịa ọnụ ahịa
Ọrịre na-ekpo ọkụ 6090 Desktop CNC Router Machine
Igwe ọkụ na-ere ọkụ osisi CNC Lathe na vetikal s ...
Akpụkpọ cnc rawụta CNC igwe-egwe ọka maka ọrịre a...